15 Iconic Disney Nziyo Nezve Hupenyu, Rudo, Kurota, Uye Mufaro - Blog
15 Iconic Disney Nziyo Nezve Hupenyu, Rudo, Kurota, Uye Mufaro
Unogona kusafunga pakarepo mafirimu evana kana uchitsvaga zvakadzama uye zvine musoro zvidzidzo zvehupenyu, asi zvinowanzo rongedzwa zvizere neaya marudzi emashoko anokurudzira.
Zvisingashamisi, iyo studio yeDisney yanga iri sosi yenyaya zhinji dzakadzama dzenyaya uye zvinyorwa, asi zvakare vakadzora dzimwe nguva dzinoshamisa dzemimhanzi dzinogona kudzidzisa vana vedu - uye nesu - kukura sevanhu.
Takarova Disney back catalog kuti tifumure nziyo dzinosimudzira uye dzinokurudzira kubva kumafirimu avo ehupenyu. Iwe unowana zvimwe zvisingakanganwike uye kazhinji epic mimhanzi pazasi. Saka (dhiramu mupumburu), zvisina hurongwa ...
1. Denderedzwa reHupenyu - Mambo weShumba
Kuvhura kunoshamisa kune The Lion King ndechimwe cheakanyanya kuratidzika kubva kune chero Disney firimu, uye chikamu chakakura chezvainoita chinouya kubva kune yakanyanya kunyorwa mamakisi uye mazwi.
Inosvika pamugumo wayo nemashoko anoti:
Ndiro denderedzwa rehupenyu
Uye zvinotifambisa tese
Kuburikidza nekupererwa netariro
Kubudikidza nerutendo nerudo
Kusvika tawana nzvimbo yedu
2. Nyika Itsva Yese - Aladdin
Iyo nguva iyo Aladdin anonyengerera Princess Jasmine kubva pahutsi hwake hwemashiripiti ndiyo yakamira nguva yemimhanzi mune ino yakanaka bhaisikopo. Iyo inobata iko kwekutanga kwerutsva rwakawanikwa rudo pavanopinda mukati merwendo runonakidza, rwakagovaniswa pamwechete.
zvinhu izvo munhu wese anofanira kuziva nezve hupenyu
Aya mazwi anoratidza kuti zvinofadza sei kuva pakutanga kwehukama kuti inganzwe sei kunge nyika nyowani yavhurika:
Iine mahoroni matsva ekutevera
Ndichavatandanisa chero kupi
Pane nguva yekuregerera
Rega ndigovere iyi nyowani nyowani newe
3. Paunenge Uchishuvira Pane Nyeredzi - Pinocchio
Izvi, pasina mumvuri wekusahadzika, imwe yeakanyanya kukosha pane dzese nziyo dzeDisney dzakaratidzwa pano nekuti yakava rwiyo kukambani yese. Ikozvino yave kushandiswa mukuvhurwa kweese Disney mafirimu kana logo yavo ichioneka pachiratidziri.
Inotitaurira kuti chero munhu anogona kuita chishuwo uye kuti zviroto zvake zviitike, zvisinei kuti ndiwe ani kana kuti wakamira sei.
Kana iwe uchida pane nyeredzi
Hazvina mutsauko zvauri
Chero chinoda moyo wako
4. Chirega Chiende - Chando
Iyi yechinyakare yechinyakare inozivikanwa uye inodiwa nevana vese veimwe zera (nevabereki vavo), uye hazvina kuoma kuona kuti sei. Kwete chete inoimbwa zvine mutsindo, asi inounza meseji yekusunungurwa kwemanzwiro akaputika pasi pechiso kwenguva refu kwazvo.
Iyi cathartic yekuchenesa simba kumusoro inzira yaElsa yekunamatira minwe miviri kumusoro kwenyika uye ari iye, sezvaari. Zvikamu zviviri zvinotevera zvakakosha murwiyo urwu:
zvinhu zvekutaura nezvako kune mumwe munhu
Chirega chichienda, chichienda
Haukwanisi kuidzora zvakare
Inguva yekuona zvandingaite
Kuedza miganhu uye kupaza
Hapana chakarurama, hapana chakaipa, hapana mitemo kwandiri,
5. Bare Zvakakosha - Bhuku reJungle
Baloo bheya uye Mowgli vanoimba iyi inonakidza inonakidza tune zvese nezvekuzorora uye nekuziva kuti 'zvisina chinhu' zvinouya kwauri paunenge uchizvida. Inokukurudzira kuti urege kushushikana kwako kupere uye kuti urege kuteedzera zvinhu zvaunogona kurarama uchifara usina.
Kusvikira kumagumo erwiyo, mimhanzi painodzikama, aya mazwi anonyanya kutapura munyika ino yemazuva ano, inodisa zvinhu yatinogara mairi:
Uye usapedze nguva yako kutarisa 'kutenderedza
Kune chimwe chinhu chaunoda chisingawanikwe
Paunoona kuti unogona kurarama pasina iyo
Uye enda pamwe usafunge nezvazvo
6. Mavara Emhepo - Pocahontas
Ichi chidimbu chemimhanzi kubva kuPocahontas chine mameseji maviri akakosha. Chekutanga ndechekuti tinogona kudzidza zvakawanda kubva kuvanhu vakasiyana nesu, uye chechipiri ndechekuti isu tinofanirwa kuchengetedza nekusimudzira zvakasikwa.
Iyo yekutanga yakapfupikiswa zvakanyatsonaka mune aya mazwi anobata:
Iwe unofunga chete vanhu vari vanhu
Ndivo vanhu vanotarisa uye vanofunga sewe
Asi kana iwe ukafamba tsoka dzemweni
Iwe unozodzidza zvinhu zvausina kumboziva, iwe zvausina kumboziva
7. Runako nechikara - Runako nechikara
Rwiyo rwemusoro wenyaya yerudo iyi rwunopfupikisa zvazvinoita kana vanhu vaviri vachidonhera kune mumwe nemumwe zvisinei nekutanga kwavo. Iyo nyoro uye yakapfava, kungofanana nechiitiko chinoenda nayo.
Kana iwe wakambozviwana iwe uchida mumwe munhu waungadai usina kupa kechipiri kutarisa pakutanga, ipapo aya mazwi anoreva chimwe chinhu kwauri:
Ngano sekare senguva
Ichokwadi sezvazvinogona kuva
Ipapo mumwe munhu anokotama
Diki kutaura zvishoma
Vaviri vakatya zvishoma
8. Hakuna Matata - Mambo Shumba
Rwiyo rwedu rwechipiri kubva kuna The Lion King rinoona Pumbaa naTimon vachidzidzisa mudiki Simba nezve yavo yakasarudzika, isina hanya uzivi. Maitiro avanoimba nezvawo ane chimwe chinhu cheZen pazviri, kwete kurega mafungiro evamwe achikukanganisa.
Inogona kupfupikiswa muhuwandu hwayo mumazwi ekuvhura:
Hakuna Matata! Mutsara wakanaka kwazvo
Hakuna Matata! Haisi kupfuura inopenga
Zvinoreva kuti hapana kunetseka kwemazuva ako ese
Ndiyo uzivi hwedu husina matambudziko
11 Zvidzidzo-Kuchinja Hupenyu Zvatinogona Kudzidza Kubva kuna Alice MuWonderland
36 Irresistibly Insightful Roald Dahl Makotesheni Ekukuzadza Iwe Neinoshamisa
13 Hupenyu-Inosimbisa Mhepo Mune Iyo Willows Quotes
6 Hupenyu Zvidzidzo Zvatinogona Kudzidza Kubva kuna Winnie-the-Pooh Neshamwari
16 Shel Silverstein Makotesheni Anozokuita Uchinyemwerera & Funga Panguva Yakafanana
9. Kufungisisa - Mulan
Iyi yekupedzisira-yekuzviongorora ballad inokurukura nyaya yekuve iwe pachako munyika inokusarudza iwe kuve mumwe munhu. Inovhara ivhu senge zvinotarisirwa nemhuri uye kudzvanyirira kwako kwechokwadi zvishuwo.
Ingoverenga aya mazwi uye hapana mubvunzo kuti uchakwanisa kuenderana nawo:
Ndiani musikana iyeye wandinoona
Nei kuratidzwa kwangu kuri mumwe munhu
yakanakisa mitambo yemutsimba ya2016
10. Chikamu cheNyika Yako - Mermaid Mudiki
Yechokwadi Disney yakasarudzika, Ariel anoimba moyo wake kuti aratidze kushuva kwake kuve chikamu chenyika yevanhu kumusoro. Iri ibharadhi kune vese avo vakanzwa zvishoma kubva panzvimbo, uye vanogara pamipendero vakatarisa mukati.
Kana iwe usati wawana dzinza rako, iwe unobva waziva chaizvo zvinoreva Ariel kana achiti:
Kumusoro kwavanofamba, kukwira kwavanomhanya
Kumusoro kwavanogara zuva rese muzuva
Wanderin 'yemahara - ndinoshuva dai ndaigona kuva
Chikamu chenyika iyoyo
11. Chimbambaira - Dumbo
Nepo rwiyo rwakagadzirirwa kune chinoshungurudza chiitiko cheDumbo achiona amai vake vakasungwa nengetani mukisikiti, inoratidzira zvakanaka rudo rwuripo pakati paamai nemwana.
Kuchengetwa kwemadzimai uku kwakapfupikiswa zvakanyanya nemazwi, ekupedzisira acho ari:
Kubva kumusoro wako kusvika kuzvigunwe
Iwe hauna zvakawanda, runako anoziva
Asi unokosha kwazvo kwandiri
12. Chera Chakadzika Zviduku - Princess neDatya
Zvichida zvishoma zvishoma zvinozivikanwa kuti vazhinji vari pane ino runyorwa, asi iine hushoma huchenjeri, rwiyo urwu rwuri rwekutarisa pazasi pechiso kuti uwane kuti chii chakanyanya kukosha kwauri.
Zvese zvakapfupikiswa zvakakwana mune aya mashoma mazwi:
Unofanira kuchera zvakadzama zvishoma
Tsvaga kuti ndiwe ani
Icho hachisi chaicho kure
13. Chiroto Chido Chako Kuti Moyo Wako Uite - Cinderella
Kana iwe wakambove nekurota kuzadzikiswa, imhaka yekuti moyo wako waida kudaro. Mushure mezvose, sekutaura kunoita rwiyo urwu rwakakurumbira, zviroto zvako zvinongova zvishuwo zvinoita moyo wako. Iyo yakanyatsoenderana ne 'mutemo wekukwezva' mhando yekufunga.
Kana iwe usingatendi musimba reroto, pamwe aya mazwi anokugonesa:
Iva nekutenda muzviroto zvako uye rimwe zuva
Muraraungu wako uchauya uchinyemwerera kuburikidza
Hazvina mhosva kuti moyo wako uri kuchema sei
Chiroto chaunoshuvira chichaitika
14. Kungotenderedza Rwizi Bend - Pocahontas
Kufungisisa muPocahontas katarogu zvakare, tinofumura rwiyo urwu runonyanya kurumbidzwa runobvunza kuti ramangwana rakamira sei, uye kugona kwedu tese kuumba magumo edu.
Mashoko kune rwiyo urwu ane simba rekutora kunyangwe munhu akanyatsogadzikana achirota izvo zvichauya:
Ini ndinotarisazve kamwe chete kutenderedza rwizi bend
Kunze kwemahombekombe uko hove dzinobhururuka dzakasununguka
Hauzive kuti chii pane izvo zvandinorota zuva rinogona kutumira
Kungotenderedza rwizi bend kwandiri, kuuya kwandiri
15. Unogona Kunzwa Rudo Rwazvino - Mambo Shumba
Hongu, tadzoka kuThe Lion King kechitatu, asi unogona kutipa mhosva? Rwiyo rwekuhwina rwaOscar urwu rwakanyatso sanganisa musanganiswa wemimhanzi uye mazwi acho aingofanirwa kuita iwo runyorwa. Zvinogona kunge zviri mushy, asi kana ukateerera mazwi acho uye wotarisa chiitiko, iwe uchave nechokwadi chekutora iyo inodziya kunzwa mukati.
Aya mazwi, kunyanya, akanyatso kukwana:
Unogona here kunzwa rudo manheru ano?
Haufanire kutarisa kure zvakanyanya
Kuba kuburikidza nekusaziva kweusiku
Rudo ndipo pavari
Ndedzipi dzenziyo idzi dzaunofarira? Siya mhinduro pazasi uye utiudze.
ndinonzwa senge handina kugona chero chinhu
zvekuita kana iwe uchinetseka kuburitsa pfungwa dzako
kubatsira munhu ane matambudziko ehukama
finn balor uye bayley hukama
ndiani mickie james akaroora